UPDATE: Dhacdo Sababtay dhimasho Iyo dhaawac oo ka dhacday magaalada Gaalkacyo | Www.tusmo.net
UPDATE: Dhacdo Sababtay dhimasho Iyo dhaawac oo ka dhacday magaalada Gaalkacyo
GAALKACYO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee gobalka Mudug ayaa xaqiijinaya in ay xalay geeriyoodeen labo qof oo mid kamid ah uu yahay Injineer dhinaca Dhismaha oo qiimeyn ku sameysay meel lagu bilaabi lahaa dhisme laga dhisayo xaafadda Garsoor ee magaaladaas.
Ninkan Injineerka ee qeymaynayey Aaga dhismahan laga dhisayay ayay la duntay mid kamid ah Suuliyaasha ka ag-dhawaa goobtaas, taas oo keentay in uu geeriyoodo, waxaana sidaas oo kale gurmad u fidiyey qaar kamid ah dadka xaafadda.
Mid kamid ah dadkii usoo gurmaday ayaa ku geeriyooday dhacdadan isna, waxaana tiradda dhimashadu ay noqotay 2 qof, sidda ay sheegayaan wararka laga helayo magaalada Gaalkacyo.
Ilaa afar qof oo kale oo shacab ah una gurmaday dadkan ay dhacdadan ku dhacday ayaa qaarkood ku sumoobay godka suuliga ah, waxaana la dhigay qaar kamid ah Isbitaalada magaalada.
Roobab wanaagsan ayaa ka da’ay dhawaan magaalada Gaalkacyo, waxayna magaaladu ku taalaa goob dooxo ah, taas oo mararka ay roobabka badani da’aan badanaa dhulkeedu yahay mid aad u jilicsan, maadaama ay biyuhu in badan oo kamid ah dhulka sare iyo lakabyada hoose galaan.